Tag: facebook wijetị | Martech Zone
Tag: facebook wijetị
Ọtụtụ mgbe, mgbe m gara na websaịtị nke ụlọ ọrụ, ihe mbụ m na-achọ bụ blog ha. Kpọrọ. Anaghị m eme ya n'ihi na edere m akwụkwọ na ịde blọgụ ụlọ ọrụ, ana m achọ ịghọta ụlọ ọrụ ha na ndị nọ n'azụ ya. Mana anaghị m ahụkarị blọọgụ. Ma ọ bụ blog dị na ngalaba dị iche kpamkpam. Ma ọ bụ na ọ bụ otu njikọ sitere na peeji nke ụlọ ha, akọwapụtara dị ka blog. Gị
Ndị mmadụ na-eche ihe kpatara na anaghị m anụ ụtọ mmemme na ASP.NET. Ọ bụ n'ihi na oge ọ bụla m mere, m na-enweta ụfọdụ peeji njehie dị ka nke a. Achọpụtara m ma ọ bụrụ na ndị ọma nọ na Microsoft enweghị ike ịmepụta ngwa nke aka ha n'emeghị ya, kedu ka m ga-esi mee?! Site na Microsoft Adcenter Labs Demographics Amụma: